Tsika Mireza Fekitori | China Tsika Mireza Vagadziri uye Vatengesi
Duplex Yekudhinda Musoro Mireza
Iyi duplex yekudhinda musoro wemureza inogona kudhindwa padtially pamativi ese maviri ejira rimwe chete. Uye jira remhando yepamusoro neinki yekudhinda inobatsira kuburitsa rakapenya ruvara. Iyo girazi yekudhinda maitiro inova nechokwadi chekuti rako uye logo zvakapetwa kaviri.
Duplex Inodhindwa Tsika Mabhanhire
Duplex inodhindwa tsika mabhena anoona kuti unonakidzwa ne100% pennetration yekudhinda maitiro. Kunyange ichidhindisa duplex, machira emhando yepamusoro uye inki yekudhinda inogamuchirwa kuti ive nerakajeka uye runopenya ruvara.
Kuwana tsika dzakagadzirwa mireza yekushandisa kwako pachako, bhizinesi, sangano kana chiitiko chakakosha hachina kumbobvira chakareruka, kana kugutsa. CFM inojekesa maitiro uye inopa hunhu hwemhando yepamusoro, hwakagadzirwa kune ako maratidziro, emhando dzakasiyana dzemireza mireza: tsika pennant mireza, kushambadzira mireza yekunze, tsika mireza, mabhendi akasarudzika, etsika burgee mireza, uye kunyange hombe tsika mireza.
Yakadhindwa ine yakajeka uye yakajeka graphic, yakasarudzika banner ndiyo nzira yakanakisa yekuunganidza pfungwa kubva kune vangangove vatengi. Imwe neimwe tsika mureza inogona kuitwa zvinoenderana neyako graphic uye zviitiko. Yedu tsika mureza zvirokwazvo sarudzo yakanaka kuita kuti kukwidziridzwa kwako kuve kwakatanhamara!